नाडा अटो शो | Ratopati
नाडा अटो शो २०१९ सम्पन्न : ८५ हजारले गरे अवलोकन, ५०० कार बुक access_timeभदौ १६, २०७६
काठमाडौं । भदौ १० देखि सुरु नाडा अटो शो २०१९ आइतबार सम्पन्न भएको छ । काठमाडौँ भृकुटीमण्डपमा चलेको अटो शोमा करिब ८५ हजार अबलोकनकर्ताले अबलोकन गरेको नाडाले जानकारी दिएको छ । यस्तै अनुमानित ५०० करोडकाे काराेबार भएकाे छ । नाडाका उपाध्यक्ष कृष्...
कस्तो छ ड्याट्सनको न्यू गो ? (भिडियोसहित ) access_timeभदौ १३, २०७६
काठमाडौं । ड्याट्सनले यस वर्षको नाडा अटो शो विशेष कारको रुपमा ‘न्यू गो’ लाई प्रदर्शनिमा उतारेको छ । नेपालका लागि ड्याट्सन र निसानको आधिकारिक वितरक पायोनियर मोटो कर्पले नाडा विशेष न्यू गोलाई उतारेको हो । नेपाली बजारमा इन्ट्रिलेभलको कार प्रदायक ब्राण्डको...
नाडा अटो शो मा म्याक लुब्रिकेन्टका तीन नयाँ उत्पादन access_timeभदौ १३, २०७६
काठमाडौं– काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको नाडा अटो शो मा म्याक लुब्रिकेन्टले आफ्ना दुई नयाँ उत्पादन प्यासेन्जर भेकलस्का लागी र एक ग्रीज लन्च गरेको छ । नाडाले आयोजना गरेको अटो सो यहि भाद्र १० गते देखि १५ गते सम्म, बिहान १० बजे देखि काठमाड...
नाडा अटो शोमा रेनल्टको ट्राइबर (भिडियोसहित) access_timeभदौ १३, २०७६
काठमाडौं । नाडा अटो शो २०१९ मा रेनल्टले नयाँ अनुहार रेनल्ट ट्राइबर प्रदर्शन गरिरहेको छ । विल्कुल नयाँ मोडल ट्राइबर अल्ट्रा मोडुलर एसयूभी कार हो । भारतीय बजरमा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नभइसकेको ट्राइबरलाई कम्पनीले नेपालमा नाडा अटो शोलाई नै लक्षित गरेर ल्याएको हो । ...
कसले चढ्ला ६१ लाखको बाइक ? access_timeभदौ १३, २०७६
काठमाडौँ । यतिखेर राजधानीको भृकुटीमण्डप नाडामय भएको छ । देशमा उपलब्ध एक सय एक गाडी तथा नयाँ मोडलका सवारी साधन प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । यता अटो व्यवसायीहरु पनि कोभन्दा को कमको प्रतिस्पर्धामा आफ्ना नयाँ र आकर्षक प्रोडक्ट प्रदर्शनमा उतारिरहेका छन् । मेलामा कसले अवलोकनकर्त...
नाडा अटो शो २०१९ : यस्तो छ टाटाको एच–फाइभ access_timeभदौ ११, २०७६
काठमाडौँ । टाटा मोटर्सको नयाँ उत्पादन एच–फाइभले यस वर्षको अटो सो तताएको छ । टाटाको विकसित मोडल एच–फाइभ नाडाको मुख्य आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ । यसलाई खरिद गर्न चाहने ग्राहकहरुको सङ्ख्या समेत बढ्दै गएको कम्पनीले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ह्...
नाडा अटो शोमा एससङ्ग योङ्ग मोटर्सको मुस्सो ग्राण्ड ४एक्स४ प्रदर्शन access_timeभदौ १०, २०७६
काठमाडौं– वर्षकै ठूलो प्रदर्शन, नाडा अटो शो सुरु भएको छ । एससङ्ग योङ्ग मोटर्सले यो वर्ष पनि आफ्नो सहभागिता जनाएको छ । भृकुटीमण्डपमा आयोजित नाडा प्रदर्शनीमा एससङ्ग योङ्गको स्टल नं. एच१४ मा कम्पनीले अधिकत्तम छुटका साथ विभिन्न आकर्षक अफर लिएर आएको जनाएको छ ।...
नाडा अटो शोमा टाटाको यस्तो छ अविश्वसनीय अफर access_timeभदौ ९, २०७६
काठमाण्डौं– टाटा मोर्टसको एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले यही भदौ १० गतेबाट १५ गतेसम्म भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनीस्थलमा आयोजना हुने १४औं संस्करणको नाडा अटो शो २०१९ मा टाटा मोटर्सका गाडीहरू खरिद गर्ने ग्राहकहरूका लागि विशेष र अविश्वसनीय अफरहरू ल्याए...